वेष्टह्यामद्वारा बर्नली पराजित : RajdhaniDaily.com - पराजित
Home Not-to-be-missed वेष्टह्यामद्वारा बर्नली पराजित
लन्डन । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा वेष्टह्यामले बर्नलीलाई २–१ ले पराजित गरेको छ । यो नतिजासँगै वेष्टह्याम युनाइटेडले शीर्ष चारमा अटाएर आगामी सिजन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा स्थान बनाउने आशा जीवितै राखेको छ ।
अवे मैदानमा भएको खेलमा वेष्टह्यामको जितमा दुवै गोल मिकेल एन्टोनिओले गरेका थिए । उनले २१ र २९ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । खेलमा सुरुवाती अग्रता भने बर्नलीले लिएको थियो । उसका लागि १९ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा क्रिस वूडले गोल गरेका थिए ।
जितपछि पाँचौं स्थानको वेष्टह्यामको ३४ खेलबाट ५८ अंक भएको छ । चौथो स्थानको चेल्सीको ६१ अंक छ । गएराति नै भएको अर्को खेलमा वेष्टब्रोम र वुल्भ्सले १–१ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् ।
युट्युबर अर्जुन शिवाकोटी : जसले पत्रकारको धाक देखाएर बलात्कार गरे
काठमाडौं । यौनशोषणको आरोपमा युट्युबर अर्जुन शिवाकोटीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाईएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका आदेशले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको महानगरीय अपराध...
पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले पर्यटकीय गतिविधि हुने क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्ध...
खेल एजेन्सी - February 29, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा प्रदेश २, कै ठूलो धनराशीको फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रदेश नं.२ को...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - May 5, 2021 0
बिचार एजेन्सी - August 25, 2020 0
सुनसरीका २६० जना सञ्चारकर्मीको कोरोना बीमा
प्रदेश १ एजेन्सी - May 29, 2020 0
इटहरी । नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लाका २६० जना सञ्चारकर्मीको कोरोना बीमा गरेको छ । प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीका अनुसार युनियन कार्यसमितिले...
रश्मि देशाईका बोल्ड तस्विर (फोटोफिचर)
Not-to-be-missed एजेन्सी - November 12, 2020 0
मुम्बई । भारतीय टेलिचलचित्र दुनियामा चर्चित कलाकार हुन् रश्मी देशाई । ‘बिग बोस १३’ मा सहभागी रश्मिका बोल्ड तस्विर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्ने...
आज साँझ पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने
Breaking News एजेन्सी - April 11, 2020 0
काठमाडौं । आज साँझ काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रको मौसम बदली भएको छ । विहानसम्म घाम लागिरहे पनि दिउँसोदेखि आकाशमा बादल देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान...
Breaking News एजेन्सी - August 9, 2020 0
काठमाडौं । विशेष अदालतले कोरोना जोखिम बढेसँगै सेवाग्राहीलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै अदालतमा प्रवेश गर्ने सबैलाई पिसिआर...
Breaking News एजेन्सी - March 8, 2021 0
अबैध भारतीय रुपैयाँसहित दुई नागरिक पक्राउ
प्रदेश ३ एजेन्सी - March 18, 2020 0
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १५ बाट प्रहरीले अबैध भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भारत बैरातपुरको पैरोसव बस्ने ३१ वर्षीय...
सरकारले चिर्नुपर्छ सूचनाको सन्त्रास
बिचार एजेन्सी - April 1, 2020 0
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका अभ्याससँगै भए÷गरिएका केही कामबारे प्रसारित सूचनाले आमजनतामा भ्रम सिर्जना गरेको सरकारको गुनासो छ । सरकारी काम कारबाहीअन्तर्गतका राहत प्याकेज कार्यक्रम, भाइरल...
उपत्यकामा निषेधाज्ञा : थप कडा, बिहान ९ बजेपछि पसल बन्द गर्नै पर्ने , फुटपाथमा व्यवसाय बन्द
एजेन्सी - December 19, 2019
एजेन्सी - December 18, 2019